बजेट राजनीतिप्रेरित र वितरणमुखी छ
डा. विजया श्रेष्ठ
प्राध्यापक, अर्थशास्त्र विभाग, त्रिभुवन विश्वविद्यालय
नेपालको अर्थतन्त्रलाई केही दशकदेखि सूक्ष्म अध्ययन गरिरहेकी प्रा.डा. विजया श्रेष्ठ सरकारले हालै प्रस्तुत गरेको बजेटलाई राजनीतिप्रेरित तथा लोकप्रियतावादी मनोविज्ञानले ल्याइएको बताउँछिन् । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक सर्वेक्षण, श्वेतपत्रलगायतका आधिकारिक प्रतिवेदनमार्फत आफैंले औंल्याएका मूल समस्यालाई समाधानमा रुचि नदेखाएको बताउने उनी साढे ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको आधार नै नरहेको बताउँछिन् भने मुद्रास्फीति पनि ६ प्रतिशतमा कायम राख्न निकै गाह्रो रहेको उनको भनाइ छ । २५ वर्षसम्म पद्मकन्या क्याम्पसमा अध्यापन गरिसकेकी श्रेष्ठ सन् २००१ मा प्राध्यापक भएकी हुन् । बनारसको बीएचयू विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गरेकी श्रेष्ठ हाल राजस्व परामर्श समितिमा पनि सदस्य छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगमा पनि सदस्य रहिसकेकी श्रेष्ठ नेपाल इकोनोमिक एसोसिएनमा कार्यसमिति सदस्य रहेकी छन् । नीति–निर्माण तथा अध्ययन–अनुसन्धान र एकेडेमिक क्षेत्रमा लामो समयदेखि सक्रिय प्रा. डा. श्रेष्ठसँग सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा केन्द्रित रहेर सरस्वती ढकालले गरेको कुराकानीको सार :
सरकारले हालै प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष (०७६-७७) को बजेटलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुुभएको छ ?
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड विनियोजन गरेको छ । कुल विनियोजित बजेटमा चालू खर्च ९ खर्ब ५७ अर्ब अर्थात् कुल बजेटको ६२.४ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ८ अर्ब अर्थात् २६.६ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, शिक्षक तथा प्राध्यापकको तलब बढाइएको छ, जसमा राजपत्र अनंकित श्रेणीका लागि २० प्रतिशत र राजपत्रांकित श्रेणीका लागि १८ प्रतिशत बढाएको छ । एकल महिला तथा ज्येष्ठ नागरिकलाई दिइने भत्तामा पनि ५० प्रतिशत वृद्धि गरिएको छ । सांसदको नेतृत्वमा रहने निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि पनि प्रत्येक क्षेत्रमा ६ करोड रुपैयाँको व्यवस्था गरिएको छ । बालबालिकादेखि ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, कर्मचारी, सांसद सबैलाई बजेटले समेटेकाले सरसर्ती हेर्दा बजेट राम्रो देखिन्छ । तर, यसको वास्तविकता सरसर्ती हेर्दा जस्तो छैन । अहिलेको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा देशको समग्र अर्थतन्त्रको विषयमा पूर्ण रूपमा लेखाजोखा गर्न सक्ने व्यक्ति हुुनुहुन्छ भन्ने आमजनताको बुझाइ थियो । बजेट तयारी गर्नुभन्दा अगाडि नेपालको बलियो पक्ष के, कमजोरी के, के–कस्ता विषयमा बढी ध्यान दिनुपर्छ भन्ने लगायतका विषय समेटेर रोडम्याप पनि तयार पार्नुभएको थियो । उहाँले तयार गरेको रोडम्याप हेर्दा ठीकै लागेको थियो, तर पनि बजेट आउँदा रोडम्याप एकातिर बजेट अर्काेतिर भएर आयोे । चालू वर्षको बजेटमा पनि बजेटमा पनि विपक्षीमात्रै नभएर उहाँकै पार्टीबाट नै विरोध आएको हो । चालू वर्षको बजेटमा धेरै विरोध आएका कारण आगामी आर्थिक वर्षको बजेट राजनीतिबाट टाढा हुन नसकेको देखियो । यो बजेट वितरणमुखी र आर्थिक सर्वेक्षणले देखाएको तथ्यांकलाई ध्यान नदिएर आफ्नै तरिकाले बजेट आएको छ । यदि बजेटले आर्थिक सर्वेक्षणका सूचकांकलाई समेट्दैन भने त्यो सर्वेक्षणको आवश्यकता के ? जहाँ कमी–कमजोरी देखिएका छन् त्यसलाई बजेटले सम्बोधन गरेर जानुपर्नेमा त्यसो भएको पाइएन । समग्रमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट राजनीतिबाट नजिक, वितरणमुखी बजेट हो ।
बजेटका मूलभूत लक्ष्य ८.५ को आर्थिक वृद्धि र ६ प्रतिशतको मुद्रास्फीति रहेको छ ? यी लक्ष्य हासिल हुनेमा कत्तिको आशावादी हुनुहुन्छ ?
उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल हुन देशमा उद्योगधन्दा फस्टाउनुपर्छ भने सेवाक्षेत्रमा पनि बढोत्तरी आउनुपर्छ । देशमा लगानीमैत्री वातारण हुनु त पर्छ नै, योसँगै विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने नीति सरकारले लिनुपर्छ । उद्योगधन्दा खुल्न सकेका छैनन्, दैनिक रोजगारीका लागि युवाहरू खाडी मुलुक जान बाध्य छन्, तर पनि सरकारले बजेटमा आर्थिक तथा सामाजिक पूर्वाधार निर्माण, पुनर्निर्माण र नवनिर्माण कार्यक्रममा तीव्रता आएको, कृषि, उद्योग र सेवाक्षेत्रको विस्तार भएको भन्दै ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ । कृषि तथा वन व्यवसाय, निजी क्षेत्रमा औद्यागिक तथा व्यावसायिक लगानी विस्तार, पर्यटन सेवामा पहुँच वृद्धि तथा सार्वजनिक निर्माण लक्षित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट ५ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने भनिएको छ । खै रोजगारी दिने ठाउँ ? उद्योगधन्दा बढ्न नसक्दा रोजगारी कसरी बढ्छ ? यो लक्ष्य पनि केवल लक्ष्य मात्रैका लागि राखिएको जस्तो लाग्छ । गत वर्ष पनि सरकारले ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने भनेको थियो, तर त्यसको तथ्यांक कहाँ छ ? कतिले कहाँ–कहाँ रोजगारी पाए भन्ने जानकारी नभएसम्म लक्ष्यलाई विश्वास गर्ने ठाउँ कहाँ छ ? अब सरकारले तथ्यांकमा जोड दिनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या ३९ प्रतिशतले घट्दा २१ प्रतिशतले रेमिट्यान्स बढेको छ ।
लहडमा लक्ष्य राख्ने तथ्यांक बोल्न सकेन भने त्यो लक्ष्य कागजी लक्ष्यमात्रै हुन्छ । अर्कातर्फ पुँजीगत खर्च ४५ प्रतिशत पनि भएको छैन, यस्तो अवस्थामा रोजगारी सिर्जनाको पक्ष कमजोर नै हुन्छ । राजस्व परामर्श समितिको बैठकमा पनि अधिकतम जानसक्ने भनेको ८ प्रतिशतसम्म हो भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो । विश्व बैंक, आईएमएफजस्ता निकायले गरेको प्रक्षेपण र आंकलन पनि कम नै छ । ८.५ प्रतिशतको लक्ष्य आफंैमा महत्वाकांक्षी छ । नेपालमा आर्थिक सूचकांकहरू हेर्दा कुनै पनि ड्राइभिङ फोर्सले साथ दिन्छन् भन्ने म देख्दिनँ । विदेशबाट आउने रेमिट्यान्सले मात्रै कहिलेसम्म देश चलाउने भन्ने गम्भीर मुद्दा हो । हामीले रेमिट्यान्स बढ्दा गर्व महसुस गर्नु जरुरी छैन । जब देशमै रोजगारी गर्ने वातावरण बन्छ, त्यो अवसर नेपाली युवाका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण बन्नेछ । अहिले त्यो अवस्था हुनसकेको छैन । यी विविध कारणले लक्ष्य प्राप्त गर्न चुनौतीपूर्ण मात्रै नभएर सम्भव पनि देखिन्न । वैदेशिक लगानी र ऋण पनि घट्दो क्रममा छ । बढीमा ६.८ भन्दा माथि जान मुस्किल पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । यद्यपि दक्षिण एसियामा पनि नेपालको आर्थिक वृद्धि उच्च नै छ ।
अर्कातर्फ हाम्रो देशको मुद्रास्फीति हाम्रो कब्जाभन्दा बाहिर छ । भारतीय बजारले नेपाललाई पूर्ण रूपमा प्रभावित पार्छ । एक त खुला नाका छ, त्यसले पनि प्रभाव पारेको छ । भारतमा मुद्रास्फीति उच्च हुँदा सबैजसो वर्षमा नेपालमा पनि उच्च हुने गरेको छ । पछिल्ला वर्षमा भारतको मुद्रास्फीति केही स्टेबलजस्तो देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिभन्दा पनि नन–मोनिटरी फ्याक्टर र ओपन बोर्डरले नेपालको मुद्रास्फीतिलाई बढी असर गर्ने गरेको छ ।
सरकारले सामाजिक सुरक्षामा बजेट बढाएको छ यसले अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पर्छ ?
नेपालको संविधानले नै ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिलाको विषयमा उचित व्यवस्था गरेको छ । संविधानविपरीत भएर कुनै पनि ऐन–कानुन आउन मिल्दैन । के–केति कसरी दिने भन्ने सरकारले गर्ने निर्णय हो । देशको अर्थतन्त्रले धान्न सक्ने गरी भत्ता बढाएका छौं कि छैनौं भन्ने कुरा सम्बन्धित पक्षले ध्यान दिनु जरुरी छ । वृद्धभत्ता, एकल महिला भत्ता के सबै पाउनुपर्ने व्यक्तिले नै पाएका छन् त ? आर्थिक रूपमा सम्पन्न व्यक्ति छ भने उसले राज्यबाट भत्ता लिनु जरुरी हो या होइन, यो विषयमा अब सरकारले ढिला नगरी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ । सरकारले दिएको सुविधा छोड्न कोही तयार छैन त्यसले गर्दा जो लक्षित वर्ग हो उसलाई प्रभाव पारेको हुन्छ । समाजको तल्लो तहसम्म सरकारको पहुँच पु-याएर त्यहाँका जनतालाई आर्थिक सहयोग पु-याउने लक्ष्य राखिएको भए पनि सम्पन्न व्यक्तिलाई भत्ता दिइरहनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । अहिले पनि स्वेच्छाले भत्ता सुविधा नलिने व्यक्ति निकै कम छन् । सरकारले सामाजिक सुरक्षा दिनु राम्रो हो, तर पारदर्शी र लक्षित समुदायलाई लाभान्वित बनाउन स्पष्ट निर्देशिका वा नीति नै बनाउनु जररी छ ।
अर्कातर्फ संघीयता लागू भएपछि पनि सांसदलाई ६ करोड रुपैयाँ दिनु उचित छैन । हिजोका दिनमा सांसदलाई दिएको पैसा कहाँ–कहाँ खर्च भयो भन्ने तथ्यांक अहिले खै ? जबकि पारदर्शी रूपमा सांसदलाई दिएको रकम खर्च हुन सकेको छैन भने बढाउनुपर्ने आवश्यकता छैन । यहाँनेर अर्थमन्त्रीज्यूले विशेष ध्यान दिनुपर्ने थियो । कन्ट्रोल मेकानिजमबिना अर्बौं रुपैयाँ बाँड्नु उचित होइन । सांसद भने कानुनको निर्माण गर्ने हो, ताकि सिधै आर्थिक गतिविधिमा सहभागी हुने होइन । आगामी चुनावका लागि जनताको मन जित्न सम्बन्धित क्षेत्रमा सांसदले काम गर्लान्, तर त्यसका लागि कन्ट्रोल मेकानिजम बनाइहाल्नुपर्ने जरुरी छ ।
आयात नियन्त्रण गरेर महत्वाकांक्षी राजस्व लक्ष्य हासिल हुनसक्ला ?
निर्यातजन्य वस्तुको पहिचान, विकास तथा उत्पादन अभिवृद्धि गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य बजेटले राखेको छ । विलासी एवं स्वास्थ्यलाई नोक्सान पु-याउने अनावश्यक वस्तु र सेवाको आयातमा निरुत्साहित गर्ने भनिएको छ । त्यसैगरी खाद्य तथा पेय पदार्थको न्यूनतम गुणस्तर तोकी सोभन्दा कम गुणस्तरका वस्तुको आयातमा बन्देज लगाइने व्यवस्था बजेटले गरेको छ । विलासी वस्तुको आयात कम गर्नु राम्रो कुरा हो । हाम्रो राजस्वमा भन्सार र करको हिस्सा धेरै छ । तर, नेपालमा खुला सिमानाका कारण भन्सारबाट जति आम्दानी देशले प्राप्त गर्नुपर्ने हो, सो बराबरको आम्दानी गर्न सकेको छैन । आयात नियन्त्रणको प्रभाव आन्तरिक उत्पादनमा पर्न सकेमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन बढाउनमा मद्दत पुग्छ । देशमै उत्पादन बढ्नु राम्रो कुरा हो, त्यसले वैदेशिक लगानीलाई समेत प्रोत्साहित गर्छ । आयात नियन्त्रणको असर राजस्वमा पर्छ नै । तर, राजस्वमात्रै हेरेर आन्तरिक उत्पादन कमजोर बनाउनु र व्यापारघाटा बढाउनु हुँदैन । वैदेशिक व्यापारमा देखिएको असन्तुलन घटाउन देशको उत्पादन प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउनुपर्छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा राजस्वबाट ९ खर्ब ८१ अर्ब र वैदेशिक अनुदानबाट ५७ अर्ब ९९ करोड रकम उठाउने लक्ष्य छ । राजस्व र वैदेशिक अनुदानले मात्रै हाम्रो लक्ष्य भेट्न सक्दैन । न्यून रकम ४ खर्ब ९३ अर्ब रकममा वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ९८ अर्ब जुटाउने सरकारको लक्ष्य छ । राजस्व परिचालन र वैदेशिक अनुदान तथा ऋण सहायताबाट पनि नपुगेको अवस्थामा १ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋणबाट उठाउने भनेको छ । आन्तरिक ऋण धेरै भयो । राजस्वको लक्ष्य भेट्न आगामी वर्ष पनि मुस्किल पर्ने देखिन्छ । आयात नियन्त्रणको प्रभाव मूल्यमा पर्छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्न उचित मेकानिजम बनाउनुपर्छ । आत्मनिर्भर भएका वस्तुमा आयात नियन्त्रण गरेर देशकै उत्पादन बढाउने प्रयास गरिएको छ । राजस्वको लक्ष्य विगतका अभ्यासलाई हेरेर निर्धारण गर्नुपर्नेमा धेरै लक्ष्य राखिएको छ । चालू वर्षको राजस्व लक्ष्य नै भेट्न मुस्किल भएका बेला आगामी वर्षको लक्ष्य ३० प्रतिशत बढाइएको छ । राजस्व लक्ष्य बढीमा २० प्रतिशत बढाउनु उचित हो ।
निजी क्षेत्र लगानीमैत्री वातावरण भएन, त्यसकारण उद्योग खुल्न नसकेका हो भन्छ, के नेपालमा लगानीका लागि उचित समय नआएको हो त ?
पहिलेको तुलनामा नेपालको वित्तीय बजार धेरै फराकिलो भएको छ । तर, सबैजसो बैंकमा ब्याजदर हेर्ने हो भने दोहोरो अंकमै छ । उच्च ब्याजदरले गर्दा उद्योगको लागत बढ्न गई रेट अफ रिटर्न घट्छ । उत्पादन लागत बढ्नुमा पूर्वाधार समस्या हो । पूर्वाधार विकास नहुँदा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा निजी क्षेत्रको योगदान अपेक्षाकृत रूपमा बढ्न सकेको छैन । यातायात क्षेत्रमा निकै समस्या छ । छिमेकी मुलुकका तुलनामा नेपालको उत्पादन लागत बढी भएका कारण सामानहरू महँगो पर्छ । त्यसकारण पूर्वाधार विकासमा सरकारले जोड दिनुपर्छ । हामीले उत्पादन गर्ने सबैजसो वस्तुहरू आयातमा भर पर्ने खालका छन् । कच्चापदार्थहरू आयातमै निर्भर हुनुपरेको छ । उत्पादनको अवस्था राम्रो नहुने, कस्ट उच्च हुँदा विदेशीहरू पनि नेपालमा लगानी गर्न नचाहेको पाइएको छ । स्वदेशकै उद्योगीहरूले पनि विस्तारै उद्योगको लगानी ट्रेडिङतिर लगिरहेका छन् । उद्योगीलाई उद्योग नै सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउन सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।आर्थिक सर्वेक्षणले देशको अर्थव्यवस्थाका सूचकका बारेमा प्रस्ट रूपमा देखाएको छ सोही अनुसार बजेटमा अर्थमन्त्रीले ध्यान दिनुपर्ने थियो । २० प्रतिशत राजस्व वृद्धिको अनुमान गर्दा ठीकै हुन्छ । यसै सम्बन्धमा राजस्व परामर्श समितिले सुझावहरू दिएको थियो, तर बजेटमा खासै समावेश भएको लागेन । केही विषयहरू समावेश भएका छन् तर धेरै तोडमोड भएका छन् । राजस्व उठेन भने त्यसको भार कहाँ जान्छ ? साधारण खर्च कम हुने कुरै भएन । पुँजीगत खर्चमा भार पर्छ ।
यो बजेट हेर्दा अर्थतन्त्र सही दिशामा गइरहेको जस्तो लाग्छ ?
न्यून बजेट धेरै भयो । त्यसको परिपूर्ति आन्तरिक ऋण तथा वैदेशिक ऋण हो । आन्तरिक ऋण जीडीपीको झन्डै ६ प्रतिशत हुन आउँछ । बढीमा ५ प्रतिशतभन्दा माथि भएमा निजी क्षेत्रमा क्राउडिन आउट इफेन्ट पर्छ । यसले लोनेबल फन्ड कम हुन्छ । यसकै कारण तरलता अभाव भई व्याजदर अझ बढ्न सहयोग छ । अनुदानको मात्रा पनि घट्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा वैदेशिक ऋण र अनुदानमा पुँजीगत खर्च निर्भर हुनु राम्रो होइन ।
अन्त्यमा आगामी वर्षको बजेट कार्यान्वयन कसरी हुन्छ ?
अर्थमन्त्रीले बजेट कार्यान्वयनका लागि धेरै मेकानिजम डेभलप गरेको बताउनुभएको छ । भनेर मात्र हुँदैन, व्यवहारमा देखिनु जरुरी छ । कर्मचारीतन्त्रको मानसिकता नफेरिएसम्म बजेटको लक्ष्य हासिल हुन मुस्किल हुन्छ । बजेटको सफल कार्यान्वयन हुन सबै क्षेत्रको उत्तिकै सहयोग र काम गर्ने इच्छाशक्ति हुनुपर्छ । सरकार दुई तिहाइको छ, अर्थमन्त्री पनि परिपक्व हुनुहुन्छ, बजेट कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमा आशा गर्न सकिन्छ ।